कोरोना प्रभाव : साइप्रसमा विद्यार्थीलाई न काम न दाम | साइप्रस नेपाल डट कम
साईप्रस भूमध्य सागरमा अवस्थित एक टापु मुलुक हो । पूर्वी युरोपमा पर्ने यो मुलुक भूमध्य सागरको तेस्रो सबैभन्दाठूलो टापु हो ।
जसमध्ये नेपाली मूलका मानिसहरूको उक्त जनसंख्यामध्ये ८ हजारजति कामदार भिसा र ४ हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी भिसामा आएका मानिसहरू छौं ।
एक बर्ष अघि साइप्रस पुगेका गोरखा विशाल गुरुङ यतिखेर घर न घाट झैं भएका छन् । खाना डिलिभरको काम बल्लतल्ल पाएका थिए । तीन महिना अघि देखि सुरु गर्दै आएका उनी अहिले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) को प्रकोप बढेसँगै समस्यामा परेका हुन् ।
यस्तै, अर्को कहिलेकाँही पेन्टिङमा काम गर्दै आएका नरेन्द्र पनि चिन्तामा छन । कसरी खाना खाने, कोठा भाडा र कलेजको शुल्क तिर्नमा चिन्तित छन । साइप्रसमा ठण्डीयाममा त्यति काम पाइदैन।साइप्रसमा खेतीको काम त्यति धेरै हुन्न ।
पर्यटकिय देश भएकाले होटेल र रेस्टुरेन्ट कोभिड-१९ को प्रभावले गर्दा बन्द भए। जसले होटल कर्मचारी र उनी जस्ता दर्जनौं नेपाली कामविहीन भएका छन् ।अब काम हुन्न भनेर साहुले बिदा दियो । होटेल रेस्टुरेन्टमा काम खोजौं टुरिस्ट नआएर चलेका छैनन् । पैसा कमाउन आएका उल्टो घरबाटै पैसा मगाएर खानुपर्ने भयो,’पीडितले दुखेसो पोखे ।
उहाँ जस्ता हजारौं विद्यार्थीको जीवन दिन प्रती दिन कष्टकर हुदै आएको छ र अहिले आएर कोरोनाले बिद्यार्थीलाई झन पिर मर्काले पिरोलेको छ। गर्मीयाम आउदै छ म जस्ता हजारौं विद्यार्थी चिन्ताजनक रहेको छ। दैनिक काम गरेर खाने विधार्थी भोलि के खाने र कसरी भाडा तिर्ने भनेर पिरालिएका छन ।
त्यसो त, कोरोनाको मार साइप्रस मात्रै होइन युरोप भरिकै नेपालीलाई परेको छ । फ्रान्स, इटाली, पोर्चुगल, जर्मनी,अस्ट्रेलिया स्विजरल्याण्डलगायतका दर्जनौं देशमा नेपालीहरुको अवस्था कठिन हुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नु होस् : कोरोना भाइरस बारे जान्नु पर्ने कुरा
कोरोनाको असरबाट‍ नेपाली विद्यार्थी अझ धेरै समस्यामा परेका छन् ।साइप्रसमा हाल लगभग चार हजार नेपाली विद्यार्थी विभिन्‍न कलेजमा अध्ययनरत छन् । ती बिद्यार्थीली सेमेस्टर अनुसार सत्तरी युरो कलेजलाई रजिस्ट्रार शुल्क बुझाउनुपर्छ। कसैको भिसाको लागि पैसा तिर्नु पर्ने छ किनभने धेरै जसो विद्यार्थी गर्मीमा काम पाइन्छ भनेर कलेजको शुल्क बुझाउदछन ।
सानो कोठा भाडामा लिए पनि महिनाको कम्तीमा पनि सय युरो माथि तिर्नुपर्छ । अधिकांश विद्यार्थीले विभिन्न होटेल, रेस्टुरेन्ट,बारमा काम गर्छन् । विद्यार्थीहरुलाई दिनको दुई घण्टा मात्रै पार्टटाइम काम गर्ने अनुमति हुन्छ । तर दैनिक खर्च र कलेजको शुल्क तिर्न तिनले रोजगारदातासँगको सहमतिमा पूर्णकालीन कामदारका रुपमा काम गर्छन् ।
साइप्रस सरकारले हालै सम्पूर्ण स्कुल , कलेज ,सपिङ्ग महल , पसलहरु , सिनेमा , थिएयटर, लाईब्रेरी , क्यासिनो तथा बेटिङ सेन्टर , पुरातात्त्विक स्थानहरु, डिपार्टमेन्ट स्टोर , थिम पार्क सङ्ग्रहालयहरु , क्याफे था कफी सफ ,होटेल र रेस्टुरेन्टर बारहरु अप्रिल ३० सम्मका लागि बन्द गरिदिएको छ जुन लम्बिने निश्चित छ जसले विधार्थीको अवस्था नाजुक बनाउने देखिएको छ ।
सरोज खड्का भन्छन्, ‘होटेल रेस्टुरेन्ट नै बन्द भएपछि अब कलेजको शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने भएको छ । व्यवसाय नै बन्द भएपछि साहुले पनि पैसा दिने कुरो हुन्न । धेरै समय बन्द भयो भने त हामीले कोठा भाडासमेत तिर्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जस्ता हजारौं विद्यार्थीको त बिजोगै हुनेवाला छ र हुँदै पनि आएको थियो र अब त झन काम नहुनेहरुको त बिजोगै हुन सक्छ।
एनआरएनए सचीव पुरन थापा जापानिज खाना सुसिका राम्रो सेफ हुन। सो कोरोनाको प्रभावले रेस्टुरेन्ट सुनसान भएपछि यतिखेर विदामा कोठमा छन । आम्दानीको श्रोत नै बन्द हुँदा अब के हुन्छ भन्ने चिन्तामा छन । कोभिड-१९ को त्रासपछि ग्राहकहरु स्वात्तै घटे । पछि सो रेस्टुरेन्ट बन्द भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा धेरै नेपाली पर्न सक्छन् । रेस्टुरेन्ट बन्द भए पछि साहुले पैसा तिर्छ कि नाई भन्ने जिज्ञासामा उनले भने “सरकारी कानुनअनुसार रीत पुर्‍याएर काम गरेकाहरुलाई पनि सरकारले दिने घोषित तलबको ६० प्रतिशतमात्रै हो । ६० प्रतिशतका दरले मासिक करिब चार सय युरो बुझ्लान् । त्यति तलबले त परिवार धान्नै पुग्दैन। रोजगारदाता इमानदार परे उसले आफ्नो कर्मचारीलाई दिन्छ । इमानदार नपरे रोजगारदाताले नै खाइदिन्छ ।’सबै साहु इमानदार हुँदैनन् । साहु राम्रो परे त देला । नदिए मुद्दामामिला गरेर असुल्न नेपालीले कानुन जान्दैनन् । भाषा हुन्न । साहु गतिलो परेन भने त त्यही पैसा पनि साहुले खाइदिन्छ । धेरै नेपाली हेरेको हेर्‍यै हुन सक्छन्,’ ।
उहाँ जस्ता धेरै जागीरको चिन्तामा छन ।
कोरोना भाइरस को प्रकोप बढे सँगै अवैतनिक नेपाली बाणिज्य दुतावास साइप्रसले यसलाई कसरी हेरेको छ ? यो अवस्थालाइ कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्न सबै को मन मा उब्जिएको छ। किनभने हामी नेपाल लगभग १२ हजार भन्दा बडी नेपालीहरु साइप्रसमा बसोबास गर्छौ र साइप्रसमा अहिले काे अबस्थामा यस्तै कुराले साइप्रसमा सबैभन्दा धेरै पिडामा विद्यार्थी रहेका देखिन्छ । यस बारे साइप्रसमा रहेका विभिन्न संघसंस्थाहरूकाे धारणा के रहेछ , म जस्ता हजारौं विद्यार्थीले साेच्ने र तपाईंलाई साेध्ने प्रश्न हाे? त्यसले सबै एक एकजुट भएर हामी सबैले योजना बनाउदा धेरै राम्रो होला कि ?
चीनमा कम हुँदै गएको कोभिड-१९ को प्रकोप युरोप र अमेरिकामा भने बढ्दै गएको छ । आइतबार मात्रै इटालीमा ३६८ जनाको मृत्यु भएको छ । सोमबार दिउँसोसम्म इटालीमा एक हजार ८ सय २०, स्विजरल्यान्डमा १४ र जर्मनीमा १३ जनाको मृत्यु भएको छ भने मंगलबार साझ सम्म साइप्रसमा ४९ जना संक्रमित भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लिमासोलमा चासोक तङ्नाम साँस्कृतिक कार्यक्रम २०७६ हुने
13/11/2019 NewsRoom 0
24/08/2019 NewsRoom 0